Gilgam စျေး - အွန်လိုင်း GGS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Gilgam (GGS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Gilgam (GGS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Gilgam ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Gilgam တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Gilgam များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GilgamGGS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.2GilgamGGS သို့ ယူရိုEUR€0.17GilgamGGS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.153GilgamGGS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.182GilgamGGS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.8GilgamGGS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.26GilgamGGS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.46GilgamGGS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.748GilgamGGS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.268GilgamGGS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.279GilgamGGS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.47GilgamGGS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.55GilgamGGS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.09GilgamGGS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹15GilgamGGS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.76GilgamGGS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.274GilgamGGS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.303GilgamGGS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.24GilgamGGS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.39GilgamGGS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥21.18GilgamGGS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩237.69GilgamGGS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦77.33GilgamGGS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.73GilgamGGS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.54
GilgamGGS သို့ BitcoinBTC0.00002 GilgamGGS သို့ EthereumETH0.000508 GilgamGGS သို့ LitecoinLTC0.00346 GilgamGGS သို့ DigitalCashDASH0.00205 GilgamGGS သို့ MoneroXMR0.00214 GilgamGGS သို့ NxtNXT14.14 GilgamGGS သို့ Ethereum ClassicETC0.0288 GilgamGGS သို့ DogecoinDOGE58.98 GilgamGGS သို့ ZCashZEC0.00211 GilgamGGS သို့ BitsharesBTS7.7 GilgamGGS သို့ DigiByteDGB6.84 GilgamGGS သို့ RippleXRP0.681 GilgamGGS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00681 GilgamGGS သို့ PeerCoinPPC0.673 GilgamGGS သို့ CraigsCoinCRAIG90.02 GilgamGGS သို့ BitstakeXBS8.42 GilgamGGS သို့ PayCoinXPY3.45 GilgamGGS သို့ ProsperCoinPRC24.79 GilgamGGS သို့ YbCoinYBC0.000106 GilgamGGS သို့ DarkKushDANK63.35 GilgamGGS သို့ GiveCoinGIVE427.52 GilgamGGS သို့ KoboCoinKOBO44.34 GilgamGGS သို့ DarkTokenDT0.184 GilgamGGS သို့ CETUS CoinCETI570.03